Qvar vs. Flovent: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည် - မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
ဖျော်ဖြေရေး ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ရပ်ရွာ ကုမ္ပဏီ, သတင်း ကုမ္ပဏီ ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် နှိပ်ပါ ပြင်းထန်သောအားကစား ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း >> Qvar vs. Flovent: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
Qvar vs. Flovent: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
Qvar နှင့် Flovent တို့သည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်အသုံးပြုသည့်နာမည်ကြီးဆေးများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုပန်းနာရင်ကြပ်သူများအတွက်အသက်ရှူမ ၀ င်ခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်းနှင့်ချောင်းဆိုးခြင်းကဲ့သို့သောလက္ခဏာများကိုကာကွယ်ရန်အထောက်အကူပြုသောဆေးများကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်သူဟုသတ်မှတ်သည်။ Qvar နှင့် Flovent တို့ကိုဆေးညွှန်းဖြင့်သာဝယ်ယူနိုင်သည်။
Qvar နှင့် Flovent တို့သည်ရှူရှိုက်မိသည့် corticosteroids ဟုခေါ်သောဆေးအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ သူတို့ကအဆုတ်နှင့်လေလမ်းကြောင်းများတွင်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်လျှော့ချခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ လေထဲမှရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ရှူရှိုက်မိသည့် corticosteroids သည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူတစ် ဦး ၏အသက်ရှူပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ Qvar နှင့် Flovent တို့သည်ကယ်ဆယ်သောရှူရှိုက်မိသူများမဟုတ်ပါ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအတွက်အသုံးမပြုသင့်ပါ။ Qvar နှင့် Flovent အကြားခြားနားချက်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
Qvar နှင့် Flovent အကြားအဓိကကွာခြားချက်များမှာအဘယ်နည်း။
၎င်းတို့တွင်အလားတူအသုံးပြုမှုရှိသော်လည်း Qvar နှင့် Flovent တွင်မတူညီသောတက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။ Flvnt တွင် corticosteroid fluticasone ပါရှိပြီး Qvar တွင် corticosteroid beclomethasone ပါရှိသည်။
Qvar နှင့် Flovent နှစ်မျိုးလုံးအားအလားတူဖော်စပ်ချက်များရရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးတစ် ဦး ရှူရှိုက်မိပါ aerosol င်မီတာ - ဆေးထိုးရှူရှိုက်မိအဖြစ်လာကြ၏။ သို့သော် Flovent သည် diskus (သို့) ခြောက်သွေ့သောအမှုန့်ရှူရှိုက်မိသည့်ပစ္စည်းများအဖြစ်လည်းရရှိနိုင်သည်။
Qvar Redihaler သည်အားသာချက်တစ်ခုအနေဖြင့် 40 m သို့မဟုတ် 80 mcg ရှိသည်။ Flovent HFA ရှူရှိုက်မိသောအားကို ၄၄၊ ၁၁၀၊ ၂၂၀ mcg အားဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ Flovent Diskus သည်စွမ်းအင် ၅၀၊ ၁၀၀ နှင့် ၂၅၀ mcg အားဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
Qvar နှင့် Flovent အကြားအဓိကကွာခြားချက်များ
မူးယစ်ဆေးအတန်း ရှူရှိုက်မိသော corticosteroid (ICS) ရှူရှိုက်မိသော corticosteroid (ICS)
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် / ယေဘုယျအဆင့်အတန်း ယေဘူယျမူကွဲမရှိပါ ယေဘူယျမူကွဲမရှိပါ
ယေဘုယျနာမည်ကဘာလဲ? Beclomethasone dipropionate Fluticasone propionate
မည်သည့်ပုံစံ (များ) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးထဲသို့ဝင်သနည်း။ ရှူရှိုက်မိပါကလေမှူ (မီတာဆေးပါသောရှူရှိုက်မိပါ) ရှူရှိုက်မိပါကလေမှူ (မီတာဆေးပါသောရှူရှိုက်မိပါ)
စံသောက်သုံးသောကဘာလဲ? အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက်လူနာများကိုပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသမှု။ နေ့စဉ် ၂ ကြိမ် ၄၀ mcg သို့မဟုတ် ၈၀ mcg
အသက် ၄ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်ကြားလူနာများကိုပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသမှု။ 40 mcg, 80 mcg, 160 mcg, ဒါမှမဟုတ် 320 mcg နေ့စဉ်နှစ်ကြိမ် Flovent HFA
အသက် ၄ နှစ်နှင့်အထက်လူနာများကိုပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသမှု။ ၈၈ mcg နေ့စဉ် ၂ ကြိမ်၊
အသက် 12 နှစ်အရွယ်လူနာများအတွက်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသမှု: နေ့စဉ် 100 ကြိမ် mcg
အသက် ၄ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်အကြားလူနာများကိုပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသမှု။ နေ့စဉ် 50 ကြိမ် mcg
ဒီဆေးကိုဘယ်သူကပုံမှန်သုံးသလဲ။ အသက် ၄ နှစ်နှင့်အထက်လူကြီးများနှင့်ကလေးများ အသက် ၄ နှစ်နှင့်အထက်လူကြီးများနှင့်ကလေးများ
Qvar နှင့် Flovent မှကုသသောအခြေအနေများ
Qvar နှင့် Flovent သည်အသက် ၄ နှစ်နှင့်အထက်ရှိသောလူကြီးများနှင့်ကလေးအထူးကုလူနာများအားပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသမှုအဖြစ် FDA ကအတည်ပြုသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုသမှုအနေဖြင့် Qvar နှင့် Flovent တို့ကိုပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Qvar နှင့် Flovent နှစ်ခုစလုံးသည်လည်းတားဆီးကာကွယ်နိုင်သည် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါတိုက်ခိုက်မှု , ဒါမှမဟုတ်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါပိုမိုဆိုးရွားလာ။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်ရန် Qvar နှင့် Flovent ကိုနေ့စဉ်သောက်သင့်သည်။ ရှူရှိုက်မိသော corticosteroids သည်အများဆုံးထိရောက်မှုသို့ရောက်ရန်နှစ်ပတ်ခန့်ကြာနိုင်သည်။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာန (NIH) ၏အဆိုအရနို့တိုက်သတ္တဝါများသည်နူးညံ့သောသို့မဟုတ်အလယ်အလတ်ရှိသူများသည် Qvar သို့မဟုတ် Flovent ကိုသောက်သုံးနိုင်သည်။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, ဒါမှမဟုတ်လိုအပ်အဖြစ် ။
Qvar နှင့် Flovent ကိုကယ်ဆယ်ရေးရှူရှိုက်သူများအဖြစ်မသုံးသင့်ပါ။ Qvar နှင့် Flovent ကဲ့သို့သောရှူရှိုက်မိသော corticosteroids များကိုပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းရောဂါများသက်သာစေရန် albuterol ကဲ့သို့သောကယ်ဆယ်ရေးရှူရှိုက်မိသူနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်သတ်မှတ်သည်။
အခြေအနေ Qvar Flovent
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Qvar သို့မဟုတ် Flovent ကပိုမိုထိရောက်သလား။
Qvar နှင့် Flovent နှစ်မျိုးလုံးသည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအတွက်ထိရောက်သောဆေးများဖြစ်သည်။ Qvar နှင့် Flovent တို့၏ထိရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ပေးသောအရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ၎င်းတို့မည်မျှအသုံးပြုသည်ကိုဖြစ်သည်။ ထိရောက်မှုရှိစေရန်ရှူရှိုက်မိသော corticosteroids များကိုပုံမှန်အသုံးပြုသင့်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူသည်ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါလက္ခဏာများပိုမိုဆိုးရွားလာနိုင်သည်။
ကျပန်းနှစ်ကြိမ်မျက်စိကန်းသောလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် beclomethasone dipropionate နှင့် fluticasone propionate တို့ကိုအမြဲတမ်းပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါရှိသူ ၄၀၀ နီးပါးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ စမ်းသပ်မှု၏အဆုံးအားဖြင့်, fluticasone propionate ၏အသုံးပြုမှုကိုရလဒ် သိသိသာသာပိုကောင်းတဲ့တိုးတက်မှု beclomethasone dipropionate နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆုတ်၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလက္ခဏာများလျော့နည်းသွားသည်။ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးတွင်အလားတူဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
meta-analysis သည်ရှူရှိုက်မိသော corticosteroids များဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် ယေဘုယျအားဖြင့်ထိရောက်သော ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသဘို့အနိမ့်သို့မဟုတ်အလယ်အလတ်ဆေးများမှာ။ မြင့်မားသောဆေး corticosteroids သည်နောက်ထပ်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ပါ။
သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသမှုအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလက္ခဏာများ corticosteroid တစ်ခုတည်းနှင့်မတိုးတက်ပါကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတစ် ဦး သည် corticosteroid နှင့် တွဲဖက်၍ ကြာရှည်စွာလုပ်ဆောင်သော bronchodilator ကိုသတ်မှတ်လိမ့်မည်။ ပေါင်းစပ်သောရှူရှိုက်မိသည့်ရှူသွင်းသူများသည် Advair (fluticasone / salmeterol)၊ Dulera (mometasone / formoterol) နှင့် Symbicort (budesonide / formoterol) တို့ပါဝင်သည်။
Qvar နှင့် Flovent နှိုင်းယှဉ်မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်မှု
Qvar ကိုယေဘူယျဆေးအဖြစ်မရရှိနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပျမ်းမျှလက်လီစျေးနှုန်းဖြင့်ဒေါ်လာ ၅၄၄ ခန့်ဖြင့်စျေးကြီးနိုင်သည်။ အချို့သော Medicare နှင့်အာမခံအစီအစဉ်များသည် Qvar ၏ကုန်ကျစရိတ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်သည်။ SingleCare မှလျှော့စျေးကဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် Qvar ၏တန်ဖိုးကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၂၁၀ အထိလျှော့ချနိုင်သည်။
Qvar ကဲ့သို့ Flovent ကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရေးဆွဲထုတ်လုပ်မှုများတွင်သာရရှိနိုင်သည်။ သို့သော် Flovent သည် Qvar နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးသက်သက်သာသာဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ Medicare နှင့်အာမခံအစီအစဉ်အများစုသည် Flovent ဆေးညွှန်းကိုအကျုံးဝင်လိမ့်မည်။ အာမခံမရှိပါက Flovent HFA ၏ပျမ်းမျှငွေသည်ဒေါ်လာ ၃၄၇ ဖြစ်ပြီး Flovent Diskus ၏ပျမ်းမျှငွေသည်ဒေါ်လာ ၂၇၉ ခန့်ရှိသည်။ SingleCare မှငွေစုကဒ်ပြားသုံးခြင်းသည် Flovent HFA သို့မဟုတ် Flovent Diskus ရှူရှိုက်မိသူများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဒေါ်လာ ၂၁၇ နှင့် ၁၇၆ ဒေါ်လာအထိလျှော့ချနိုင်သည်။
အရေအတွက် 1 ရှူရှိုက်မိပါ 1 ရှူရှိုက်မိပါ
ပုံမှန် Medicare copay $ 24- $ 293 $ 3- $ 297
SingleCare ကုန်ကျစရိတ် $ 208 + $ 217 +
Flvant vs. Qvar ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Qvar နှင့် Flovent တို့သည်အလားတူဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသည်။ ရှူရှိုက်မိသည့် corticosteroids များအနေဖြင့်ဤဆေးများသည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါကူးစက်ခြင်း၊ nasopharyngitis၊ rhinitis နှင့် sinusitis စသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤဆေးနှစ်မျိုးလုံးသည်အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်ပျို့ချင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
Qvar သို့မဟုတ် Flovent သည်ပါးစပ်တွင်းထိုးသွင်းခြင်း (သို့) ပါးစပ်အတွင်းဖန်းဂတ်စ်ကူးစက်မှုများမြင့်တက်နိုင်သည်။ Qvar သို့မဟုတ် Flovent ကဲ့သို့သောရှူရှိုက်မိသည့် corticosteroid ကိုသောက်သုံးပြီးနောက်ရေကိုမျိုချခြင်းမပြုသင့်ပါ။ ပါးစပ် thrush ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်တစ် ဦး နဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်ကိုခေါ်စက်ကိရိယာ Flovent HFA ရှူရှိုက်မိပါနှင့်အတူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ရှူသွင်းမိသော corticosteroids ၏ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာဝိရောဓိဖြစ်သော bronchospasm နှင့် hypersensitivity တုံ့ပြန်မှုများဖြစ်သည်။ Paradoxical bronchospasm ဟာရှူရှိုက်မိတဲ့ corticosteroid ကိုသုံးပြီးချက်ချင်းပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။ ပြင်းထန်သောအဖုအပိန့်ထွက်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းစသည့် Hypersensitivity တုန့်ပြန်မှုများကိုဤဆေးများတွင်ပါ ၀ င်သောမည်သည့်အရာနှင့်မဆိုဓာတ်ပြုသူများအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် bronchospasm (သို့မဟုတ်) sensersensitivity တုံ့ပြန်မှုလက္ခဏာများနှင့်လက္ခဏာများကြုံတွေ့ရလျှင်ချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူပါ။
ခံတွင်း thrush ဟုတ်တယ် ≥3% ဟုတ်တယ် > 3%
အထက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါကူးစက် ဟုတ်တယ် ≥3% ဟုတ်တယ် > 3%
နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ဟုတ်တယ် ≥3% ဟုတ်တယ် > 3%
နာတာရှည် ဟုတ်တယ် ≥3% ဟုတ်တယ် > 3%
Sinusitis ဟုတ်တယ် ≥3% ဟုတ်တယ် > 3%
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဟုတ်တယ် ≥3% ဟုတ်တယ် > 3%
ချောင်းဆိုး ဟုတ်တယ် ≥3% ဟုတ်တယ် > 3%
ပျို့ချင်သည် ဟုတ်တယ် ≥3% ဟုတ်တယ် > 3%
ရင်းမြစ် - DailyMed ( Qvar ), DailyMed ( Flovent )
Flvant vs. Qvar ၏မူးယစ်ဆေးဝါး interaction က
CYP3A4 inhibitors အနေဖြင့်ပြုလုပ်သောဆေးများသောက်နေစဉ် Qvar နှင့် Flovent ကဲ့သို့သောရှူရှိုက်မိသော corticosteroids များကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။ ဤဆေးများကိုသောက်သုံးခြင်းဖြင့် corticosteroids ၏သွေးအဆင့်ကိုတိုးစေပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ CYP3A4 inhibitors ဥပမာများတွင် ritonavir, ketoconazole နှင့် clarithromycin တို့ပါဝင်သည်။
Immunosuppressant ဆေးများသောက်နေစဉ် corticosteroids ကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ Immunosuppressant ဆေးများသည်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုအားနည်းစေပြီးလူတစ် ဦး အားရောဂါကူးစက်မှုကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိစေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် corticosteroid သောက်နေလျှင်။ Immunosuppressant ဆေးများတွင် azathioprine နှင့် Cyclosporine တို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့သည်သွေးစီးဆင်းမှုကိုအနည်းဆုံးစုပ်ယူနိုင်သောကြောင့်၊ ရှူသွင်းမိသော corticosteroids သည်အခြားဆေးများနှင့်အပြန်အလှန် corticosteroids များကဲ့သို့ဆက်ဆံခြင်းမပြုနိုင်ပါ။
မူးယစ်ဆေးဝါး မူးယစ်ဆေးအတန်း Qvar Flovent
Saquinavir CYP3A4 inhibitors ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Methotrexate Immunosuppressants ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Qvar နှင့် Flovent တို့၏သတိပေးချက်များ
အထူးသဖြင့်ရေရှည်အသုံးပြုသည့်အခါရှူသွင်းမိသော corticosteroids သည်အရိုးတွင်းထွက်ဓာတ်သတ္တုသိပ်သည်းဆကိုလျော့နည်းစေသည်။ အရိုးပွရောဂါသို့မဟုတ်အရိုးပွရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသောလူနာများသည် corticosteroids ကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်သို့မဟုတ်ကုသမှုတစ်လျှောက်လုံးစောင့်ကြည့်သင့်သည်။
ရှူသွင်းမိသည့် corticosteroids သည်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ပြီး၊ အထူးသဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာမြင့်မားသောဆေးများကိုသောက်သုံးသည့်အခါရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုတိုးစေသည်။ ရောဂါကူးစက်လွယ်သောလူနာများသည်ရှူမိသော corticosteroids များကိုရှောင်ရှားသင့်သည်သို့မဟုတ်ကုသမှုတစ်လျှောက်လုံးစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသင့်သည်။
ရှူရှိုက်မိသော corticosteroids သည်အန္တရာယ်တိုးပွားစေနိုင်သည် နဂါးငွေ့တန်း နှင့်မျက်စိအတွင်းတိမ်။ Qvar သို့မဟုတ် Flovent ကဲ့သို့သောရှူရှိုက်မိသည့် corticosteroid ကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း intraocular pressure တိုးပွားလာသောသို့မဟုတ်အမြင်အာရုံမှုန်ဝါးမှုရှိသောလူနာများကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။
ရှူရှိုက်မိသည့် corticosteroid မသုံးစွဲမီအခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသတိပေးချက်များနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအကြောင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ပြောဆိုပါ။
Qvar vs. Flovent နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
Qvar သည်ရှုရှိုက်ရောဂါလက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်အသုံးပြုသောရှူရှိုက်မိသော corticosteroid ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရှူရှိုက်မိသောရှူမိပါသည့်ရှူရှိုက်မိသည့်ရှူရှိုက်မိသောလေခတ်အဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။ Qvar ကို Teva ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ Qvar တွင် beclomethasone ပါဝင်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသရန် ၂ ကြိမ်သောက်ပါသည်။
Flovent သည်ရှူရှိုက်မိသည့် corticosteroid ဆေးကိုပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလက္ခဏာများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုရှူရှိုက်မိခြင်းကြောင့်လေမှုတ်စက်သို့မဟုတ်ရှူရှိုက်မိသောအမှုန့်အဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။ Flovent ကို GlaxoSmithKline မှထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းတွင် fluticasone ပါဝင်ပြီးများသောအားဖြင့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသရန်နေ့စဉ် ၂ ကြိမ်သောက်လေ့ရှိသည်။
Qvar နဲ့ Flovent အတူတူလား။
Qvar နှင့် Flovent နှစ်ခုစလုံးတွင် corticosteroid ပါရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်အတူတူမဟုတ်ပါ။ Qvar တွင် beclomethasone နှင့် Flovent တွင် fluticasone ပါရှိသည်။ Qvar နှင့် Flovent တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောဖော်မြူလာများဖြင့်လာကြသည်။ Qvar ကိုရှူရှိုက်မိခြင်း Aerosol အနေဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ Flovent ကိုရှူရှိုက်မိခြင်း Aerosol နှင့်ရှူရှိုက်မိခြင်းအမှုန့်အဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။
Qvar သို့မဟုတ် Flovent ပိုကောင်းသလား။
Qvar နှင့် Flovent တို့သည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရန်အတွက်ထိရောက်သောဆေးများဖြစ်သည်။ အချို့ လေ့လာမှုများ Flovent သည် Qvar ထက်ပိုမိုနိမ့်ဆေးများထက်ပိုမိုထိရောက်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ သို့သော်နှစ် ဦး စလုံးဆေးဝါးများအလားတူဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသည်။ အထိရောက်ဆုံးရှူရှိုက်မိသည့် corticosteroid သည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်အတွက်ပုံမှန်အသုံးပြုသည်။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသမှုအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ဆွေးနွေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ် Qvar သို့မဟုတ် Flovent ကိုသုံးလို့ရပါသလား။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း Qvar သို့မဟုတ် Flovent သည်လုံးဝလုံခြုံမှုရှိသည်ဟုဖော်ပြရန်လုံလောက်သောအချက်အလက်မရှိပါ။ သို့သော်ရှူရှိုက်မိသော corticosteroids သည်သွေးစီးဆင်းမှုကိုအကန့်အသတ်ရှိသောကြောင့်၎င်းတို့သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ယေဘူယျအားဖြင့်လုံခြုံသည်ဟုမှတ်ယူကြသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အကောင်းဆုံးပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသမှုရွေးချယ်စရာများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ငါအရက်နှင့် Qvar သို့မဟုတ် Flovent ကိုသုံးနိုင်သလား။
အရက်နှင့် Qvar သို့မဟုတ် Flovent နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုကိုမသိရှိပါ။ သို့သော်အရက်သုံးစွဲမှုသည်သတင်းများဖြစ်သည် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလက္ခဏာတွေများအတွက်ခလုတ် တစ် ဦး ချင်းစီ၌တည်၏။ Qvar သို့မဟုတ် Flovent ကဲ့သို့သောရှူရှိုက်မိသည့် corticosteroid သောက်နေစဉ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ပြောဆိုပါ။
Qvar သည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသည့်ရှူရှိုက်မိသောဘီကီမိုသာသုန်းဆိုသည့် corticosteroid ပါရှိသည်။ အများဆုံးထိရောက်မှုအတွက်၎င်းကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်အသုံးပြုသင့်သည်။ ရှူရှိုက်မိသည့် corticosteroid တစ်ခုအနေဖြင့် Qvar သည်ကုသမှုစတင်ပြီးနောက်တစ်ပတ်မှနှစ်ပတ်အထိအကျိုးအရှိဆုံးကိုမပေးနိုင်ပါ။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအတွက်အကောင်းဆုံး steroid ရှူရှိုက်မိပါကဘာလဲ?
အကောင်းဆုံး steroid ရှူရှိုက်မိပါကပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလက္ခဏာများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်သင်ပုံမှန်အသုံးပြုသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှူသွင်းမိသည့် corticosteroids သည် Alvesco (ciclesonide)၊ Qvar (beclomethasone), Flovent (fluticasone), Pulmicort (budesonide) နှင့် Asmanex (mometasone) တို့ပါဝင်သည်။ ဆေး၏ထိရောက်မှုသည်ဖော်မြူလာနှင့်ဆေးပမာဏအပေါ်မူတည်သည်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအတွက်အကောင်းဆုံး steroid ရှူရှိုက်မိသည့်အခါရွေးချယ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကဲ့သို့သောအခြားအချက်များကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံး steroid ဆေးရှူခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ပြောဆိုပါ။
Qvar တွင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် beclomethasone ဟုခေါ်သော corticosteroid ပါရှိသည်။ အခြား corticosteroids များကဲ့သို့ပင် Qvar ကို immunocompromised သို့မဟုတ် immunosuppressants ယူနေသောလူနာများတွင်သတိထားအသုံးပြုသင့်သည်။ corticosteroids သောက်နေစဉ်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေများမြင့်တက်နိုင်သည်။ တီဘီရောဂါ၊ ဖန်းဂတ်စ်၊ ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်ကပ်ပါးပိုးကူးစက်ခံထားရသောသူများအား corticosteroids ကိုသတိထားအသုံးပြုရန်အကြံပြုနိုင်သည်။
mucinex ကို sudafed pe နဲ့စားနိုင်သလား
benadryl ကို claritindနဲ့ ၂၄ နာရီသောက်နိုင်သလား